कम्युनिस्ट के हो ? र, को हुन ? कम्युनिस्ट बिश्व प्रशिद्ध चलचित्रहरू हेर्नुस «
कम्युनिस्ट के हो ? र, को हुन ? कम्युनिस्ट बिश्व प्रशिद्ध चलचित्रहरू हेर्नुस
प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार २१:३३
अक्टोवर क्रान्ति पश्चात राजनीति, समाज र कलाका क्षेत्रमा समाजवाको बारेमा चासो बढेर गएको देखिन्छ। विसौ शताव्दिका निकै अब्बल मानिएका र समिक्षकको वाहवाहि पाएका विभिन्न चलचित्रहरू समाजवादी विचार निकट थिए।ती मध्ये केही महत्वपूर्ण चलचित्रहरु तल दिइएको छ ।
यो सन 1925 मा बनेको मुक चलचित्र हो। यसको निर्देशक सर्गेइ इसेन्सटिन थिए। यो चलचित्रमा 1905 मा भएको बिद्रोहलाई फिल्मिकरण गरिएको छ। उक्त बिद्रोह रसियन युद्धपोतका सदस्यहरूले तिनिहरुका हाकिमहरुका बिरुद्ध गरेका थिए। यो चलचित्रमा इन्सेसटिनले मोन्ताजका सिद्धान्तहरुको कलात्मक प्रयोग गरेका छन।
1927 मा जर्मनीमा बनेको यो एउटा साइन्स फिक्सन चलचित्र हो। यो मुक चलचित्रमा भविष्यमा बन्ने सहर , त्यो सहरका नीति निर्माता र मजदुरहरुका बिछछमा आउने फाटोलाई मुख्य बिषय बनाइएको छ।
3. Ernst Thalmann
यो दुई भागमा बनेको बायोपिक चलचित्र हो। यो अर्नस्ट थालमानको जीवनमा आधारित छ। अर्नस्ट थालमान जर्मनीको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता थिए। उनी गेस्टापोद्वारा 1933 मा पक्राउ परेका थिए र हिटलरको व्यक्तिगत आदेशमा 1944 मा गोलि हानि उनको हत्या गरिएको थियो। चलचित्रको पहिको भाग Son of his Class मा एउटा सेनाको रुपमा विचारमा आएको बद्लावलाई देखाइएको छ।दोस्रो भाग Leader of his Class मा नाजि पार्टिका विरुद्ध जर्मनीका सबै मजदुरको एकीकृत मोर्चा बनाउने उनको प्रयासको वर्णन छ।
4. Laal Salam
1990 मा बनेको यो चलचित्रले केरलाको कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुवाती दिनहरुको बारेमा वर्णन गर्छ र यसलाई तीनवटा कमरेडहरूको नजरबाट देखाउन खोजिएको छ। कम्युनिष्ठलाई प्रतिबन्ध लगाएको बेलामा कसरी तीन पात्रले प्रतिकुल परिस्थितीसँग पौठेजोरी खेल्छन भनेर चलचित्रमा देखाइएको छ।
यो बर्नार्दो बर्तोलुस्कीले 1976 मा बनाएको रंगिन चलचित्र हो।यसले दोस्रो विस्वयुद्धको समयको इटालियन समाजमा फासिवादका विरुद्ध लड्न समजवाद कत्तिको सफल सिद्धान्त थियो भन्ने देखाउछ। यो चलचित्र एउटा गाउँमा एकै दिन जन्मिएका दुई मान्छेको कथा हो। जसमध्ये एउटा श्रमिकको छोरा हुन्छ भने अर्को जमिन्दारको छोरा हुन्छ। पाँच घन्टा लामो चलचित्रले दैनिक जीवनका सम्वन्ध, प्रेम र संघर्षलाई देखाउछ।
1936 मा बनेको चार्ली चाप्लिनको यो चलचित्रले औधोगिक समाजका समस्याको बारेमा वर्णन गर्छ। सर्वहारा वर्गमा अलगाव कसरी पैदा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने हो भने यो फिल्म हेर्नु पर्छ। यसले औधोगिक सर्वहारा वर्गको खास समस्यालाई मिहिन रुपमा हास्य रस सहित देखाएको छ ।
यो पियर पाओलो पासोलिनिले 1969 मा बनाएको चलचित्र हो। पासोलिनी ती एक मध्येका उपन्यासकार हुन जसले मार्क्सवादी अध्ययनलाई अंगालेका थिए। यो चलचित्र दुई भागमा बाँडिएको छ। पहिलो भागले उच्च वर्गको मान्छेमा आउने विच्छेदिकरण प्रकृयालाई देखाउछ भने दोस्रो भागले सिकार खोज्दै हिडेको नरभक्षी मान्छेलाई देखाउछ। यसलाई बिम्बहरूको प्रयोग गरेर कलात्मक बनइएको छ ।
सोभियत संघमा क्रान्ति पश्चात् प्रविधिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई यसले देखाउछ। अरु बाटाहरू हुदाहुदै मार्क्सवाद कसरी सहि बाटो हो भनेर यसले देखाउन खोजेको छ। नयाँ आर्थिक नीति 1929 मा आइसकेपछि ग्रामिण संगठनको कार्यहरुमा कसरी परिवर्तन आयो भन्ने कुरा यो चलचित्रले देखाउछ ।